Kedu mgbe ogbako gị ọzọ ga - abịa? | Martech Zone
Kedu mgbe ogbako gị ọzọ ga - abịa?
Offọdụ ụlọ ọrụ m na-arụkọ ọrụ, ọkachasị azụmaahịa azụmaahịa (B2B) na-ahụ ụfọdụ nsonaazụ dị ịtụnanya wee laghachi na itinye ego na iji azụmaahịa na mmemme azụmaahịa. Anọ m na-achọ biputere banyere mebere omume ahịa ruo oge ụfọdụ, na-adịbeghị anya wee na-agwa okwu Ikpe na-ezighi ezi, na-eduga mebere omume, mebere tradeshow na online ọrụ ngosi na-eweta online.
Unisfair na-enye ngụkọta ngwanrọ dị ka ikpo okwu Ọrụ, gụnyere software nke ogbako, sọftụwia weebụ, nkata n'ịntanetị, nchịkọta ndu na akuko akụkọ. N'adịghị ka ogbako ọdịnala ebe ọ na-esiri ike ịgbaso ndị bịara, nzukọ a na-eme eme na-enye gị ohere ịchụ ihe niile! Na mgbakwunye na ọnụego mbelata ndu, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewere nzukọ ndị mebere iji na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Na nyocha tupu afọ a, Ikpe na-ezighi ezi hụrụ pasent 48 nke ndị ahịa na-eme atụmatụ ịbawanye ojiji nke ihe eji eme ihe na afọ na abia. The kasị ewu ewu na ihe mere mebere ihe ndị na- ịgbatị ahịa iru (Pasent 32) na mụbaa olu ndu (Pasent 15).
Mgbasa Ozi Azụmaahịa America ekwuola na 75% nke ndị na-eme mkpebi azụmaahịa nyochara kwuru na ha gara ihe omume atọ ma ọ bụ karịa nke Web n'oge ọnwa 12 gara aga. Azụmaahịa Sherpa ekwuputala nzukọ a na-ahụ anya emeela 37% ka ọ bụrụ ihe ọmụma n'oge ọkara nke mbụ nke 2009. Mkpachapụ anya njem njem, mgbawa mmekọrịta mmekọrịta na ọchụchọ maka usoro ọhụụ ọgbọ ọhụụ jikọtara iji kpalite uto a ngwa ngwa.
Ariba bụ otu nke Unisfair's akụkọ ọma. Ariba bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa ụwa niile ghọtara na akụnụba ga-emetụta ndị mmadụ na-aga nzukọ ha ọzọ. N'iji usoro nke Unisfair, ha kpaliri nzukọ ha na-ahụ maka ịntanetị ma rite uru dị ukwuu, na-ebute ndị na-edebanye aha 2,900, ndị bịara 1,618, nbudata 4,000, nleta ụlọ 5,200, mkparịta ụka 538 bidoro na ozi 1,078! Nke ahụ bụ njikọ dị mma!
3 Atụmatụ maka Virtual Omume Marketing
Joerg Rathenberg, onye isi oche ahịa ahịa maka Unisfair, enyela ndụmọdụ ndị a maka ịre ahịa mmemme ọfụma:
Tupu ihe omume ahụ: Bido ịkwadebe nke ọma, dịka ị ga - eme maka ọgbakọ ma ọ bụ ihe omume omume. Gbaa mbọ hụ na ị nwere atụmatụ ọgbọ ọgbọ na-ege ntị. Buru ihe ma gbalịa ime ka ahụmịhe ahụ dị ka o kwere mee. Ọmụmaatụ, zipụ ihe omume nchịkọta na ogbako ihe t-shirts ka registrant ma ọ bụrụ na ị na-ana maka ihe omume. Nye nko na ịkparịta ụka n'socialntanet na-enye ndị na-edebanye aha ohere ịkekọrịta òkù na obodo ha. Jide n'aka na itinye ọdịnaya na-atọ ụtọ na ndị ọkà okwu nwere ike ịdọrọ igwe mmadụ. Ezigbo ọdịnaya bụ isi ihe ga-eme ka ihe omume na-aga nke ọma! Gbaa mbọ hụ na ndị na-edebanye aha nwere oge mmalite na kalenda ha.
N'oge ihe omume ahụ: Chichaa oge gị ka ọ bụrụ obere - n'oge ihe omume emebere, ndị mmadụ anaghị enwe otu uche ka ndị bịara ahụ. Anyị chọpụtara na 20 nkeji bụ ogologo kachasị mma. Jide n'aka na ndị na-ekwu okwu gị dị maka mkparịta ụka na ebe a na-akparịta ụka n'thentanet. Nye ọtụtụ ohere ịmekọrịta, netwọk na jikọọ. Leverage ntuli aka na njikọta mmekọrịta mmekọrịta iji mepụta mkpọtụ ma were ọnọdụ okpomọkụ nke ihe omume gị. Akụkọ oge ga-agwa gị ihe na-eme. Jiri ozi ka ụgbọala ndị mmadụ ka ebe ihe. Nye mkpali maka ndị bịaranụ itinye aka, dịka asọmpi ma ọ bụ eserese.
Mgbe ihe omume ahụ gasịrị: Ihe omume na-eme ngwa ngwa na-etolite ngwa ngwa na ntinye aka na ntanetị. Ihe ọdịnaya gị niile, gụnyere Q&A, kwesịrị ịdị na-abịa ozugbo na ngwa ngwa ozugbo akụkụ dị ndụ gafere. Ihe dịka 50% nke ndị na-edebanye aha na-egosi ndụ. Jide n'aka na ị ga - enweta 50% ọzọ iji gaa - ka emechara. Leverage ngwaọrụ dị ka Unisfair's Engagement Index iji debe ndị na-ege gị ntị dabere na njirimara, omume na ọdịmma ha ma nye ndị otu a ozi a maka ịgbaso. Ihe omume mebere nwere uru ị ga-amata ihe niile onye bịara ya mere mgbe ọ nọ na gburugburu gị. Nye ihe omuma a nile nye ndi ahia gi iji hu na ha nwere ike iga n’ihu na mkparita uka.
Fọdụ ndị egwuregwu ndị ọzọ n'ahịa dị InXpo, ON24, Ngosipụta2, Ebe nke abụọ na 6Connex. Adịbeghị m njikere ịhapụ ihe omume anụ ahụ - achọpụtara m uru bara ụba na ịkparịta ụka n'withntanet na ndị ọzọ bịara. Ebe ọ bụ na ọnụahịa ogbako nwere ike ịmalite na $ 50k, agbanyeghị, ogbako ọfụma kwesịrị. You're ga-adọta ọtụtụ mmadụ ndị nwere nnukwu atụmanya mana na-ezere ọnụ ahịa ma ọ bụ nsogbu nke njem.
Tags: Ihe omumeiheogbako onyonyoemegbu
Ego ole ka ị na-akwụ maka nchịkọta efu?
WordPress hacked? Nzọụkwụ iri iji mezie Blog gị